Apple waxay xidhi doontaa goobada Apple Silicon dhamaadka sanadkan | waxaan ka imid mac
Iyada oo sawirkan Craig Federighi uu furay Mac-kii ugu horreeyay ee M1 laga soo bilaabo shaybaarka sirta ah ee Apple Park, mashruuca ayaa la bilaabay Silicon Apple, shaki la'aan waa tan ugu muhiimsan ee shirkadda sanadihii la soo dhaafay.
Intii lagu guda jiray bandhiggaas, madaxweyne ku xigeenka waaxda software-ka ee Apple wuxuu sharraxay in u-beddelka dhammaan Mac-yada ku saleysan soo-saareyaasha Intel loo beddelo kuwa cusub oo leh naqshadda ARM, ay socon doonto laba sano. Wax walbana waxay u muuqdaan in taariikhaha la buuxin doono, iyada oo dib u cusboonaysiinta dhamaadka sanadkan ee Mac-kii ugu dambeeyay ee chip Intel, Mac Pro.
Tusiyaha wararka caanka ah ee Apple, DylanDTK, ayaa lagu dhejiyay akoonkaaga Twitter in Apple ay qorshaynayso inay dhamaystirto waxa loogu yeero "Apple Silicon" kala guurka dhamaadka sanadkan. Waxay sharraxaysaa in rubuci afaraad ee 2022, Apple ay bilaabi doonto Mac Pro-keeda cusub oo leh processor ARM, si ay u bedesho moodalka hadda ee ku qalabaysan Intel.
Model cusub ayaa lagu rakibi doonaa processor-ka cusub ee M-taxane ah, ma noqon doono mid ka yimid qoyska M2, laakiin M1 ka awood badan yahay kan hadda jira ee M1 Max. hayn kara ilaa Qalabka 40 farsamaynta iyo Qalabka 128 loogu talagalay garaafyada. Bahalnimo dhab ah.
Haddii aan xisaabta ku darno in shirkadu ay qorsheyneyso inay bedesho tan hadda jirta 27-inji iMac Dhawaan, oo leh processor-ka Intel, oo loogu talagalay Apple Silicon cusub, (laga yaabo 32 inji) ka dib kaliya Mac Pro ayaa ahaan doona midka ugu dambeeya ee Intel ee ku jira bixinta kombuyuutarka Apple.
Marka marka Apple's ugu awooda badan Mac uu dib u soo celiyo saddex biloodlaha afaraad Sannadkan, mashruuca Apple Silicon wuxuu joojin doonaa inuu noqdo "mashruuc" wuxuuna noqon doonaa taariikh, tan iyo isbeddelka ka yimid Macs-yada Apple, oo dhammaantood ku salaysan processor-yada Intel, si ay u haystaan ​​​​dhammaan iyaga oo wata processor u gaar ah oo leh naqshad ARM ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Xanta » Apple si ay u xirto wareegga on Apple Silicon dhamaadka sanadkan
UGREEN HiTune X6: buuqa joojinaya taleefoonnada dhegaha ee kaliya € 40,49